Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya:- Madaxweynaha Jabuuti Oo Ka Hadlay Xiisadda Labada Waddan | Gaaroodi News
Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya:- Madaxweynaha Jabuuti Oo Ka Hadlay Xiisadda Labada Waddan
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku arkay shirkii IGAD ee ka dhacay Jabuuti, xilli ay wehlinayeen madaxda Itoobiya iyo Jabuuti
Hase ahaatee, xaaladda ayaa waji kale yeelatay kaddib markii dowladda Soomaaliya ay aad uga carootay natiijada guddigii Jabuuti oo muujisay in ay “inta badan waxba kama jiraan ahaayeen eedeymihii ay Soomaaliya u jeedisay Kenya.
Muxuu yidhi Madaxweynaha Jabuuti?
“Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya way ku khasban yihiin in ay wadashaqeeyaan, in ay xiriir fiican yeeshaan, in ay is isxtiraamaan, dadku ay wax wada qabsadaan,” ayuu yidhi isagoo si adag u Hadlaayay
“Tan ugu horreysa, Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxeyn karta ma jirto, tan labaadna howshan waxay ku timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo bandhigay shir madaxeedkii IGAD, oo nala yiri ‘idinkaa ugu dhowe bal soo eega’, waan iska diidi karnay oo waan odhan karnay cid kale u dirsada, laakiin kalgacal baan u oggolaanay,” ayuu yidhi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi: “Waxa aan soo aragnay iyo waxa aan qornayna ragga Soomaaliyeed ma aysan aqrininba runta haddii la fiiriyo, mana garanayaan wixii ku dhex jiray meeshaas. Shir madaxeed baa lala sugayaa oo arrintaas lagu faaqidi doonaa ayaa ku qoran, waxa loo buunbuuniyay ee loo qeyliyay annagu ma garaneyno.”
Waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday sababta uu xilligaas uga jawaabi waayay caradii dowladda Soomaaliya ay ka muujisay tallaabadii Jabuuti.
“Waan iska diiday inaan jawaab iyo waxba ka bixinin arrintaas, maxaa yeelay dabka haddii lasii huriyo dhibaato unbuu keenayaa. Wax weyn ma aha arrinkaasina wuu iska dhammaanayaa haddii Alle yiraahdo,” ayuu yidhi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Arrinta Soomaaliya iyo Kenya ma aha mid ku kooban farogalinta ay Soomaaliya ka cabatay iyo arrimaha gobolka Gedo oo kaliya, balse labada waddan ayaa sidoo kale waxaa u dhaxeeyay muran dhinaca xadka badda ah oo in muddo ah soo jiitamayay.
Maalmaha soo socda waxa ay mar kale indhaha warbaahinta caalamka ku mashquuli doonaan khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo la filayo in 15-ka bishan ay maxkamadda caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) billowdo dhageysiga kiiska dacwadda Badda.
Kenya ayaa dhawaan dalbatay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska inkastoo garsoorka maxkamadda iyo dowladda Soomaaliya labaduba ay arrintaas ku gacan seyreen.
Maanta ayuu guddiga Soomaaliya u qaabilsan kiiskaas ka dhoofay magaalada Muqdisho, waxaana ay u diyaar garoobayaan in ay dacwada uga qeyb galaan maxkamadda.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed, oo hoggaaminaya guddiga matalaya Soomaaliya ayaa sheegay in ay rajo fiican ka qabaan kiiska.
Kenya ayaa heysata fursad ay dhageysiga dacwadda uga qeyb gasho qaab maqal iyo muuqaal ah ama in wakiilladeedu ay ku xaadiraan xarunta ICJ